Ogaden News Agency (ONA) – CIA oo la wareegtay Maamulka Itobiya ee sii kala daadanaya
CIA oo la wareegtay Maamulka Itobiya ee sii kala daadanaya
Posted by ONA Admin	/ July 18, 2012
Wargaysyo iyo TV-yo caalami ah ayaa soo qaatay maqaal uu qoray saxafiga ku-xeel dheer arimaha Geeska Afrika Mr. Thomas Mountain uu ku eegayo xaaladda ka jirta Itobiya isagoo sheegay inay tahay dawlad sii kala daadanaysa, taasaana keenaty buu yidhi in CIA-da talada dalka Itobiya iyo go’aan qaadashada wasaaradaha muhiimka ah wax laga weydiiyo.
Inay sidaa u dhacdo oo CIA-da ay faraha la soo gasho siyaasadda Itobiya ayuu sabab uga dhigay saxafigan; dagaaladii jabhadaha oo sii xoogaysanaya, dhaqaalaha oo hoos u sii dhacaya, rabitaanka mujtamaca diiniga ah in taliska dalka la rido oo sii kordhaya, iyo takoorka xukunka Meles oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. Waxaa muuqata in xukunka dalka Itobiya uu gacanta u galay koox yar oo ku xeeran Meles oo boob ku haysa hantida dalkaa, iyadoo aanay jirin awood madaxtinimada ka wareejin karta Meles Zinawi.
Markay shacabka Masar kacdoonka sameeyeen, durbadiiba Mareykanka waxay goaa’nsadeen in laga maarmo Xusni Mubaarak, waxayna ku dhaqaaqeen qorshaha xiga–Plan B- oo ah Ciidanka in xukunka ay qabtaan. Ma jiro Itobiya –Plan B- u diyaar ah Mareykanka, sababtoo ah Meles oo ogaa inay Mareykanka ka maarmi karaan markay u baahdaan, ayaa ciidanka Itobiya kala sifeeyay wuxuuna ka takhalusay qofkasta oo u muuqan kara midkii lagu badali lahaa.
Dhamaadkii sanadkii tagay ayuu Meles wuxuu hawlgabnimo siiyay 120 ka mid ah Jeneraaladii iyo kornayladii ugu muhiimsanaa ciidanka ee ka hadhay ciidamadii jabhadda TPLF ee xukunka u dhiibay Meles 1991.
Markii laga nacay gobolka Tigray oo uu ka soo jeedo, oy neceen aqoonyahanka yaree Amxaarada oo horey u xukumi jiray dalkaa, ayuu Meles wuxuu gacanta u galiyay wasaaradihii farsamooley (technocrat) ka soo jeeda CIA iyo W. Arimaha Dibadda Mareykanka.
Dawladda Mareykanka waxay aad isugu dhabar jabinaysaa sidii xukunka loogu sii hayn lahaa Meles Zinawi maadaama aanay arkin ilaa hadda qof kale oy aamini karaan. Arintan waxay ku riday caloolyow badan xafiisyada Aqalka Cad ee Mareykanka iyo La-taliyaha MW Obama arimaha Afrika Mr. Smith.
Wuxuu intaa raaciyay qoraaga, in ilaa hadda 7da bilyoon ee doolar ee la siiyo sanadwalba uu ku hayo xukunka Meles Zinawi iyo ciidanka Itobiya ee ugu xooga iyo qalabka badan Afrika, kuwaasoo Mareykanka uga fuliya Geeska Afrika waxyaabaha hawlaha fuusha xunee ay doonaan kolba.
Itobiya laguma tilmaami karo umad, balse waa xabsi umado la’isugu geeyay. Shacabka Ogadenya, Oromiya, Gambella iyo Cafar oo ah 2ba dalool Itobiya ayaa doonaya inay helaan xaqooda aaya-ka-tashi oo ka dhigan madax-banaan. Hadday sidaa dhacdo, tasoo hadda aan la baajin karin buu yidhi qoraaga, wax la yidhaahdo Itobiya ama ciidanka Itobiya oo Mareykanka uu ku shaqaysto dib dambe uma sii jiri doono.
Natiijadana waa in Eretreeya oo ah 5 malyan ay noqoto dawladda ugu xooga badan ciidan ahaan Geeska Afrika oo hal-ku-dhigooda yahay –Marnaba ha u Foorarsan Cadawgaaga-.
Si kastaba CIA-da ha ugu dhex jireen Wasaaradaha awooda leh ee Itobiya, waxaa soo dhawaaday oo aan la baajin karin dhicitaankii xukuumada Meles Zinawi, taasoo ka dhigan Itobiya oo laga waayi doono khariidada caalamka.